Waalidiinta oo dib u billaabay bannaan-baxyada | KEYDMEDIA ONLINE
Waalidiinta caruurtooda la askareeyay ayaa dib u billaabay mudaharaadyada, ay ku doonayaan in Xukuumadda Xil-gaarsiinta meel ugu sheegto, dhallaankoodii ay fahad iyo Farmaajo dhumiyeen.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waalidiinta Soomaaliyeed, ee caruurtooda loo qaaday dalka Eritrea, kadibna la sheegay in laga dagaal galay waqooyiga Itoobiya, ayaa dib u billaabay bannaan-baxyada ay ka dhigayaan waddooyinka magaalada Muqdisho.
Maalintii labaad waxaa Caasimadda ka socoda mudaharaad, ay dhigayaan hooyooyinka caruurtooda ay Kooxda Farmaajo u daabuleen dagaalka sokeeye ee ka socda Itoobiya, waxayna dalbanayaan in raq iyo ruux Xukuumaddu meel ugu sheegto dhallaankooda la dhumiyay.
Ku dhawaad labo bilood ayaa ka soo wareegtay markii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu magacaabay guddi soo baara cabashada waalidiin Soomaaliyeed, kuwaas oo aan caruurtooda raq iyo ruux midna heyn in muddo ah, hayeeshee, ma jirrto wax shaqo ah oo guddigu ilaa hadda qabtay, isla-markaana uu la wadaagay bulshada.
Keydmedia Online, ayaa hore u tabisay in Rooble, u tafaxeytay marin-habaabinta, qaddiyadda dhalinyarada maqan, kadib markii uu magacaabay guddi, ay xubno ka yihiin qaar ka mid ah shaqsiyaadka ku eedeysan kiiska askarta laga dagaal galiyay waqooyiga Itoobiya, ilaa haddana aan meel lagu sheegin nolol iyo geeri.
Sidaas oo ay tahay waalidiinta ayaa wali raja ka qaba Xaafiiska Rooble, waxa ayna codsanayaan inuu aamusnaanta ka baxo, melena ugu sheego caruurta ay Fahad iyo Farmaajo iibsadeen.